Waxaan ku tijaabineynaa alaabada cusub ee Huawei gurigaaga "smart home" | Androidsis
Miguel Hernandez | | Huawei, Mobiles
Waqtiyada COVID ee ka hortagga, wax walba waa suurtagal. Huawei waxay u aragtay inay ku habboon tahay inay na soo xigto dhammaan tallaabooyinka amniga ee laga filan karo shirkad u dhiganta si aan u dareemo wax soo saarkeeda cusub, sida lagu sameeyay nolosheena oo dhan, waxaanan kuu sheegi doonaa waxa khibradeennu leedahay ahaa.
Xiriirkeennii ugu horreeyay ee aan la yeelanno Huawei Watch Fit, FreeBuds Pro iyo Watch GT 2 Pro ayaa naga tagay dhadhan fiican, nala soo socodsii iyaga. Shirkada Shiinaha waxay sii wadaa in aan la joojin karin, iyadoo sii wadaysa khariidadeeda wadada marka la eego soo bandhigida wax soo saarka iyadoo wajaheysa sanad cakiran 2020 oo durbaba sii dhamaaneysa.
1 Saacadaha: Daawasho Habboon iyo Daawasho GT 2 Pro
2 Dhawaaq: FreeBuds Pro iyo FreeLace Pro
3 Dhawaaqa X iyo isdhexgalka buuxda
Saacadaha: Daawasho Habboon iyo Daawasho GT 2 Pro
Daawashada G2 Pro waxaan ku helnay sheyga "premium" ee qofku filan karo, xiriirkeena ugu horreeyay wuxuu si gaar ah u fiicnaa, tayada dhammaystirkeeduna waligiis kama joogsan inuu naga yaabsado, miisaanka, xargaha iyo wixii ka sarreeya shaqadiisa. Waxaan leenahay mitir oksijiin ah, 14 maalmood oo is-maamul ah, in ka badan 100 qaabab tababar ah iyo naqshad aan cidna dan ka lahayn. Goor dhow waxaad arki doontaa gorfayntayada qotada dheer, pesto in aan horeba u tijaabinay. Xaqiiqdii waxay na xusuusin doontaa sababta ay ugu tahay mid ka mid ah kuwa ugu iibinta badan smartwatches suuqa.
Daawo GT 2 Pro
Dhinaceeda, waxaan la yaabay daawashada cusub ee 'Fit Fit', oo ah saacad aad u iftiin yar oo qaab afargeesle ah leh oo si gaar ah ii soo jiidanaysa. Waxaa si cad loogu talagalay isboortiga, oo leh qaabab tababar oo 96 ah. Waxaan awoodnay inaan ku tijaabinno mashiinka fuulista ee ay Huawei noo diyaarisay iyo halka aan ku qirayo inaanan soo bandhigin natiijo gaar ah oo cajiiba, Huawei's Watch GT 2 Pro horeyba wuu u joogey inuu i xusuusiyo. Qiimaha Watch Fit waa kaliya 129 euro taasna shaki la'aan waxay ku sii hayn doontaa meesha ugu sarreysa iibka iyadoo la siinayo astaamaheeda muhiimka ah sida GPS.
Dhawaaq: FreeBuds Pro iyo FreeLace Pro
Dhanka codka, Huawei wuxuu ku cadeeyay FreeBuds 3 in aysan jirin wax ay ka masayrto magacyada kale ee hormoodka ah, si kastaba ha noqotee, waxay wali haysatay qodax ay siiso macmiilka nidaam dhab ah oo laxidhiidha buuqa. Xaaladdan oo kale dib-u-naqshadeynta ayaa hadda bixisa suufyo iyo nidaam baajin caqli-garaad leh oo gaaraya illaa 40db, waa wax aad loogu xisaabtamo. Tijaabintayadu runtii waxay ahayd mid lala yaabo heerarka kaladuwan ee joojinta buuqa iyo ogaanshaha caqliga leh ee dhawaaqyada digniinta ah ee ka hooseeya kontaroolada Miguel Morales.
Waxaan haynaa 2W lacag bixin wireless ah, Bluetooth 5.2 iyo anteeno labalaab ah si loo helo kafiican. Iyada oo ku dhowaad astaamo isku mid ah ay yimaadaan 'FreeLace Pro', kuwa sameecadaha dhagaha la isku qurxiyo ee loogu talagalay cayaaraha ugu badan. Nidaamkeeda isku xirnaanta ee loo maro USB-C (oo waliba iyaga lagu eedeeyo) ayaa sii ahaanaya mid muhiim ah. Labaduba waxay leeyihiin 14mm wadayaal deeqsi ah iyo kiiska FreeLace waxay lahaan doontaa 24 saacadood oo wadar ahaan loo maqli karo. Waqtigan xaadirka ah kuma siin karno qiimaha badeecadaha iyo sida looga heli karo Spain, laakiin waxaa loo maleynayaa inaan ku haysan doonno kanaalka iyadoo aad dib u eegis ku sameyn doonto sida ugu dhaqsiyaha badan.
Dhawaaqa X iyo isdhexgalka buuxda
Waxaan tijaabinay markii ugu horeysay Huawei smart speaker, oo loo yaqaan 'Sound X', iyo sidoo kale taxane ah alaabooyin cusub oo loogu talagalay in nolosheena maalinlaha ah looga dhigo mid fudud guriga dhexdiisa qaabka cabirka caqliga, cadayga mustaqbalka taasi weli ma ahan wax soo saar iyo wax ka badan. Natiijadu waxay tahay in Huawei uu gaarayo heerka ugu sarreeya ee isdhexgalka alaabooyinka oo shaki la'aan kor u qaadaya wax soo saarka iyo astaamaha guriga ku xiran. Sound X wuxuu bixiyaa dhawaaq cad oo xoog badan, in ka badan inta ku filan qolka iyo mid gaar ah dareen iyadoo la tixgelinayo alaabada kale ee Huawei.
Dhanka kale, wali waxaan sugeynaa midda cusub MateBook X iyo MateBook 14 taas oo ay dhawaan lafaguri doonaan asxaabta ka socota Actualidad Gadget. La soco maxaa yeelay waxaan haynaa waxyaabo badan oo aan kaaga sheegi doono wax ku saabsan Huawei oo aadan u baahnayn inaad seegto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Waxaan ku tijaabineynaa wax soo saarka cusub ee shirkadda Huawei "smart home"
'Waxyaabaha aan ugu jeclahay weligood' waa waxa cusub ee ka socda Spotify si aad ula wadaagto heesaha aad jeceshahay iyo podcasts